Maitiro ekudzima iyo iPhone kana iPad isina simba bhatani | IPhone nhau
Vazhinji vashandisi vePadad vanosiya zvishandiso zvavo zuva rese kunyangwe kana vachingoishandisa zvishoma nezvishoma. Vamwe vashandisi vanoenderera mberi nekudzima zvachose kana vachiziva kuti vanozove mazuva mashoma vasina kuishandisa, kuitira kuti pese pavanofanira kuishandisa vanenge vaine bhatiri zvichingodaro. kurukura hupenyu hunobatsira pazviri, sezvo chiri chimwe chezvinhu zvechigadzirwa chinotambura zvakanyanya nekufamba kwenguva. Uye kana vachizvitaura kubhatiri reiyo iPhone. Nekusvika kweIOS 11, Apple yakawedzera basa nyowani rinotibvumidza kudzima zvachose chishandiso kubva kumamiriro eIOS.
Iri basa nyowani rinotibvumidza kudzima nyore nyore yedu iPhone kana iPad usina kumbobvira washandisa bhatani remagetsi, bhatani ratinoshandisa kudzima skrini yaro. Iyi sarudzo inotitadzisa kubva pakudzvanya bhatani remagetsi kwemwedzi mishoma kudzamara sarudzo yekudzima gadziriro yaonekwa, panguva iyoyo tichafanirwa kutsvedza munwe wedu pane sarudzo kuti tione kuti tinoda kuidzima. Iyi sarudzo nyowani inongowanikwa muIOS 11, saka usatsvage sarudzo mune dzakapfuura shanduro, sezvo isingawanikwe.
Dzima iPhone / iPad kubva kuIOS 11 Zvirongwa
Maitiro acho akafanana chaizvo, zvisinei nekuti tinoita pane iyo iPhone kana pane iyo iPad.
Chekutanga pane zvese tinokwira kumusoro Zvirongwa
Mukati meZvirongwa tinotarisa sarudzo General uye tinya pairi.
Mukati meGeneral, tinoenda kusarudzo Dzima
Tevere, bhatani ratinofanira kutsvedza kuratidza kuti tinoda kudzima chishandiso chichaonekwa pachiratidziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima iPhone kana iPad isina bhatani remagetsi
Akawandisa emoji? Fixmoji inokutendera iwe kuve neayo chete aunoda